Ankazomborona - Wikipedia
Isam-ponina 25 267 mponina
Ankazomborona dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Marovoay, Faritanin'i Mahajanga. Ny isam-poniny dia 25267 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 40609 ary ny kaodin-distrika dia 406
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 25-50%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mais. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny isan'omby dia 19745. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mais. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 60 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 5000 no isan'ny ombivavy be ronono. 60 ny mponina no miasa tany. 5 ny mponina no miasa amin'ny fanjonoana. 30 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 5 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 218 no isan'ny kisoa.
Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia kamiao kely. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 1 ora. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 1 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 10000 Fmg. Misy fikambanan'ny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 10000 Fmg.
1 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 29 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 10 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 60 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ahitana miaramila ao amin'ilay kaominina. Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 3. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina. 4 no isan'ireo mpamono olona tratra tanatin'ny taona 1999-2001.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ankazomborona&oldid=797774"